अँध्यारो आकाशको महत्व
प्रकाश प्रदूषणलाई नियन्त्रण गरी रातको आकाशलाई अँध्यारोमै हेर्न पाइयोस् ।
साथी शोहिदूललाई यस्तो कष्ट किन ?
शोहिदूल आलमलाई जेल चलान, सरकार र राज्यलाई पर्यायवाची ठान्ने प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको स्वेच्छाचारी निर्णयबाट भएको थियो।
हामरस्कल्डले जनवरी १९६१ को ‘नेशनल जोग्राफिक’ पत्रिकामा ‘ए न्यू लूक एट एभरेष्ट’ शीर्षकको लेख छापे, जसमा आकाशबाट खिचेका सगरमाथा, अन्नपूर्ण, धवलागिरि लगायत हिमालका तस्वीर पहिलोपल्ट विश्वका हिमाल पारखीमाझ राखे ।
समय मिलाउन सक्नुहुन्छ भने जानुहोला जोरपाटी, गोमा दुलाललाई भेट्न ।
विरोधाभासलाई छिचोल्दै करुणानिधिले दक्षिण भारत मात्र होइन दक्षिणएशियामै आफ्नो छाप छोडेर गए ।
आज सम्पादक र प्रकाशक ‘राम्रो’ लेख, अनुसन्धान, विश्लेषणको खोजीमा छन्, आफ्नो पत्रिकालाई पाठकप्रिय बनाउन र प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्न । यस्तै, डेस्क र सम्पादनको तहमा पुरुष हुन् या महिला, सक्षम व्यक्तिको खोजी छ ।
सर्वोच्चको प्रश्नः विद्यालय कि बन्दीगृह ?
धन्य ! सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा वरिपरि लक्ष्मणरेखा कोरेर मास्न नपाइने नजिर स्थापना गरिदिएको छ।
देशभर निजी विद्यालयको बिगबिगीमाझ अपवाद बाहेक आजकल विपन्नले मात्र आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालय पठाउँछन् । अतः सामुदायिक विद्यालयको जमीनलाई व्यापारी प्रयोजनमा लगाउनु भनेको गरीबको बच्चाको खेलमैदान खोस्नु हो।
को निप्पल, को बटन् !
डनल्ड ट्रम्पले नेपाल के हो, कहाँ छ भन्ने नजानेको खबर नियास्रो मान्नुपर्ने कारण होइन ।
नबनौं ‘द अग्ली नेपाली’
नेपाली पोलिटी (राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक समाज) ले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न मन छ भने समुद्रपारहरूका मित्रहरूसित वैरभाव थाले हुन्छ ।
आज नेपालमा एक्कासि जागेको जिनोफोबिया (विदेशीप्रतिको विद्वेष) ले राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी संयन्त्र र केही हदसम्म नागरिक समाजलाई समेत डोर्‍याइरहेछ, र यो प्रवृत्तिले देश र जनतालाई फलिफाप गर्दैन । बरु, उत्तरी र दक्षिणी छिमेकलाई हाम्रो मामलामा अझ बढी हावी गराइदिन्छ ।
सर्वत्र अनर्थ !
आज हामीले सडक, राजमार्ग र हवाईमार्गमा दुःख पाउनुको कारण विगतमा कसैले गरेको गल्ती हो ।
बाफिएर रोयो हिमाल
आज द्वन्द्वकाल, ज्ञानेन्द्र क्षण, संक्रमण अवधि, नाकाबन्दी पार गर्दै संविधान लेखिंदा र तीन–तीन सरकारको निर्वाचन भइसक्दा नेपाल वास्तवमा स्थायित्व तथा समृद्धिको सँघारमा उभिएको छ भन्ने आस होइन अठोट सबैमा थियो । तर स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय सरकार हाँक्नेहरूको तरिका र रवैया हेर्दा लागिपरेका जनताको आस फेरि एकपटक खेर जाने पो हो कि !
कान्तिपुर दैनिकका नयाँ सम्पादकले खुला समाज र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पहरेदारी गर्ने नै छन् ।
समीर जैनले के कुराको पर्वाह गरेनन् भने एउटा दैनिक भनेको तयारी चाउचाउको प्याकेट बेच्ने जस्तो सिद्धान्त र दर्शनविहीन बजारको उत्पादन होइन । र, २०० वर्षअघि स्थापना भएको टीओआई जैन खानदानको मात्र सम्पत्ति होइन ।
नबिर्स समावेशी !
पञ्चायतले गरेन, प्रजातान्त्रिक कालमा भएन, द्वन्द्वकाल यसै बित्यो, संक्रमणकाल (भागबण्डाको युग) मा पनि समावेशी नियुक्तिप्रति पर्याप्त ध्यान गएन । हरेक जिब्रोमा ‘समावेशी’ झुण्डिंदा पनि नियुक्तिहरूमा त्यसो भएन ।
केपी ओली सरकारले १४ भदौदेखि २ फागुनसम्मका नियुक्तिहरू खारेज गर्‍यो । यो निर्णयमा बहसको ठाउँ होला, विशेषगरी सक्षम व्यक्तिहरू फ्याँकिएकोमा, तर समावेशीपनको लागि केही गर्ने मौका पनि आएको छ ।
ट्रम्पले भर्खरै मात्र उत्तरकोरियाका अधिनायकसँग हात मिलाए, हाम्रा नेताले त उहिल्यै मीत लगाइसकेका थिए ।
न्यू योर्कमा बज्राचार्य मुकुट
आज काठमाडौं उपत्यकाका बज्राचार्यहरूले प्रयोग गर्ने मुकुटहरूले एक हजार वर्षभन्दा लामो दक्षिण एशियाली र नेपाली इतिहास समेटेका छन् । बज्राचार्य मुकुटको यो प्रदर्शनी नेपाल ल्याइए ऐतिहासिक यो सम्बन्ध बुझ्न अझै सहज हुनेथियो ।
हामीलाई ‘इतिहासविहीन’ मुलुकमा परिणत गर्न कतिपयको चेष्टा पनि होला र इतिहासको बेग्लाबेग्लै व्याख्या पनि हुन सक्ला, तर समयचक्रको शून्यतामा कुनै समाज टिक्न सक्दैन ।
चे, गणेशजी र सिपाही
यी तीन आइकन चित्रले नेपाल नियालिरहेछन्, जति हामी यिनलाई हेरिरहेछौं ।
आजकाल भाडाका गाडीमा मुख्यतः तीन ‘आइकन’ देख्न पाइन्छ । एउटा गणेश भगवानको स्टाइलाइज् प्रस्तुति, अर्को त्यसै गरी प्रस्तुत गोरखाली सिपाहीको शिर र अर्को क्रान्तिकारी नेता चे गेभाराको आइकन । दिनानुदिन सडक–राजमार्गमा कुदिरहने माइक्रो र अन्य सवारी साधनमा यत्रतत्र देखिने मुख्यतः तीन आइकन कसरी यहाँ आइपुगे, के हो यिनको उत्पत्ति ? यत्ति जान्न पाए आफ्नै ‘सांस्कृतिक उत्थान’ हुन्छ भन्ने लागेर थोरै अध्ययन गरें ।
पर्यटक आकर्षणको सन्दर्भमा कहाँ छौं त हामी ? एउटा मापक हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिकाउ ट्राभल र टुरिजम् सम्बन्धी चिल्ला पत्रिकाहरू ।
हामीसँग इतिहास, भूगर्भ र प्रकृतिले दिएका वरदान प्रशस्त छन्, पर्यटन उद्योगलाई सफल बनाउन । तर पनि ‘हाई एण्ड टुरिजम्’ को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएन नेपाल ।
जीवनको सही अर्थ बुझेकैले हुनुपर्छ, डा. उपेन्द्र देवकोटा काम गर्न पनि नेपालै आए, ठूलो रोगले च्याप्दा पनि नेपालै फर्किए ।
ज्यानसँग लुकाएको कुरा
नयाँदिल्ली शहर पुग्न आधा बाटो कटिसकेर धौलाकुवाँ नजिक आइपुग्दा पो झल्यास्स भएँ, ज्यानको सामान त प्लेनमै छुटेछ ! खङ्ग्रङ्ग भएँ, हवाईजहाजबाटै खसे झैं । एउटा कलाकारको वर्षौंको परिश्रमलाई यसरी बिर्सिएर हिंडेको ! अक्षम्य ! हरायो भने ? ! मुटु ढुक्–ढुक् गर्‍यो । ट्याक्सीलाई फर्कन लगाएँ ।
लडाइँको साक्षीः बेनीको खम्बा
बेनीमा भएको आक्रमण देखेको उक्त ‘बेनीको खम्बा’ २०६७ सालसम्म आफ्नै ठाउँमा खडा थियो, तर यसलाई संरक्षण नगर्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसलाई हटाएर अर्को नयाँ खम्बा गाड्ने र खम्बाको कवाडीको बास हुने निश्चित थियो ।
चुमिक सेन्को र जलियाँवाला बाग घटनाबारे नेपाली इतिहास बेखबर हुनुहुँदैन ।
नेपाल धेरै कारणले गजब छ । गजब हुनुको एउटा कारण हो, यो एकदमै ‘फोटोजेनिक’ छ ।
टेकू दोभान विलाप
उपत्यकावासीको संस्कृति र इतिहास बेगरको सोचको उपज हो टेकू दोभानको यो दुरवस्था।
ती साहसी जसले तत्कालको निर्णयबाट क्षति रोक्छन् र पर्दा पछाडि जान्छन्
खतरनाक लोकरिझ्याइँको प्रभाव विरुद्ध लेख्नु तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ, किनकि प्रतिक्रियामा भौतिक हमलाको खतरा अलि कम हुन्छ । तर, ‘मब् फ्युरी’ विरुद्ध तत्कालै निर्णय लिई आक्रमणकारीहरुकै सामु पीडितको बचाउमा अघि सर्ने साहस अतुलनीय हुन्छ ।
यस्ता ‘इन्स्टिङ्कटिभ् साहस’ देखाउने व्यक्तिहरू ‘मैले यस्तो गरें, उस्तो गरें’ भन्दै बढाइचढाइ गर्दै हिंड्ने खालका हुँदैनन् । तत्क्षणको माग अनुसार जे गर्नु थियो त्यो गरिसकेपछि स्वभावतः पर्दा पछाडि जान्छन् । साहसको क्षणलाई भजाउने कोशिश गर्दैनन् ।
‘सफ्ट पावर’ प्रक्षेपण
देशैभर स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको राजनीतिक स्थिरताको जग मजबूत छ । राजनीति धुमिल पार्ने विदेशी हस्तक्षेप पनि अब कम हुने देखिएकोले सफ्ट पावरलाई परिचालित गर्ने बेला भयो ।
हिमाल, पहाड, तराईको पर्यटकीय सम्भावनाहरूले पनि नेपाललाई सफ्ट पावर दिएको छ, जसको लाभ आजसम्म जनतामाझ पर्याप्त पुग्न सकेको छैन ।